बीमाको इतिहासमा नेपाल - Aathikbazarnews.com बीमाको इतिहासमा नेपाल -
बीमाको इतिहासमा नेपाल
बीमाको प्रचलनको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा ई.पू. ३ हजार वर्ष अघिको बेबोलोनिया र सुमरमा पुग्नु पर्नेहुन्छ । यी दुवै स्थान अहिलेको इराकमा पर्दछन् । त्यसबेला यी दुई राज्यका व्यापारीहरुले जहाजमा हुने चोरी, डकैती तथा अन्य क्षतिबाट बच्नका लागि सामूहिक रुपमा कोषको निर्माण गरेका थिए । त्यही कोषबाट यस्ता जोखिमहरुको क्षतिपूर्ति गर्दथे । यही अवधारणलाई आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरणलाई कम गर्न प्रयोग गरियो ।
२००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो संस्था नेपाल कम्पनी ऐन अन्तर्गत नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको थियो । २०१६ सालमा यो कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स एन्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी लिमिटेडमा परिवर्तन भयो । पछि वि.सं. २०४८ सालमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नामबाट निर्जवन बीमाको काम गर्ने गरी पुर्न नामाकरण गरिएको थियो । वि.सं २०२४ साल पुष १ गते एक करोड रुपैयाँ अधिकतम पूँजीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना भयो । ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५’ आएपछि वि.सं. २०७५ पुष १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा परिर्वतन गरियो । यसले स्थापनाको प्रारम्भमा निर्जिवनमा बीमाको कार्य गरी २०२९ देखि जीवन बीमा प्रारम्भ गर्यो ।
‘बीमा ऐन २०४९’ अनुसार ‘जीवन बीमा व्यवसाय भन्नाले कुनै व्यक्तिको जीवन सम्बन्धमा निजको आयुका आधारमा किस्ताबन्दी बुझाउने गरी कुनै खास रकम तिरेमा निजले वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको हकवालाले कुनै खास
रकम पाउने गरी गरिने करार सम्बन्धी व्यवसाय सम्झिनुपर्छ ।’ त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले जीवन बीमाको महत्व बुझेर बीमा गर्नुपर्छ । अहिले प्रत्येक गाउँ, सहरमा बीमा अभिकर्ता पनि रहेका छन् ।
वि.सं.२०४६ साल अगाडी बीमा व्यावसाय गर्ने निजी स्तरको कम्पनीको रुपमा २०४४ सालमा नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मात्र स्थापना भएको थियो । निजी कम्पनीले सुरुमा निर्जिवन बीमा व्यावसाय र त्यसको दुई बर्षपछि मात्र जीवन बीमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति पाएको थियो ।
हिमालयन बैंकको २ अर्ब ३१ करोड १७ लाख १३ हजार रुपैयाँ